USA oo Toddobaadka dambe marti-gelinaya wada-hladii nabada ee dalalka Isreal iyo Falastiin – Radio Daljir
Luulyo 20, 2013 4:20 b 0
Ammaan, July 20- 2013 – Dowlada Maraykanka ayaa daaha ka qaaday in toddobaadka dambe ay ka furmi doonaan Washintong, wadahalo nabadeed oo u dhexeeya Falastiin iyo Isreal, xili ay labbada wadan gaareen heshiis dib loogu bilaabayo wada-hadalladii nabada ee u dhexeeyey.
Xog-hayaha arimaha debeda ee Maraykanka Jonh Kerry oo booqashadiisii lixaad ku jooga wadanka Jordan ee Barriga ku yaala ayaa sheegay in labbada wadan ay gaareen heshiis buuxa, kaas oo lagu ogolaaday in wada-hadalladu ka dhacaan Washintong.
Mr. Kerry oo saxafiyiinta kula hadlayey magaalada Ammaan ee dalka Jordan ayaa xusay in heshiis ay gaareen labbada dhinac, heshiiskaas oo ?salka ku haya wadahadalo toos ah oo gudhig u noqonaya soo afjarida khilaafkooda baahsan.
Mr. Saciib Erekat oo ah madaxa wada-xaajoodka Falastiin iyo dhigiisa Isreal Tizibi livini ayaa u safraya magaalada Wahsintong oo uu uga bilaabmayo wada-hadal todobaadka soo aadan, Maraykanku wuxuu ku tilmaamay arintaas mid soo afjari karta colaadii Isreal iyo Falastiin.
Wada-hadalladii ugu dambeeyey ee Isreal iyo Falastiin ayaa fashilmay muddo haatan la joogo saddex sano, wakhtigaasi oo ay Dowlada Falastiin ka carootay dhismayaal ay Isreal ka bilowday Danta Galbeed iyo barriga Jaarusalaam.
Wakaalada wararka ee AFP ayaa baahisay in dhinacyada Falastiin ee kala ah Fatax iyo Xamaas ay ku kala aragti duwan yihiin wada-hadalka lala gelayo Isreal ee ka furmaya magaalada Washintong ee dalka Maraykanka, ururka Xamaas waxay tilmaameen in Madaxweyne Cabaas uusan meteli karin shacabka Falastiin.
Puntland Oo ka qeyb galaysa shirka caafimaadka Soomaaliya oo ka dhacaya Uganda (Dhegeyso)